Okpomoku di elu oku na nri nri nri YiZheng
Akpaaka Nkwakọ ngwaahịa
Vetikal Chain Fatịlaịza C ...
New Ordị Organic & Com ...
Disc Organic & onyinye ...
Rotary Drum onyinye Fatịlaịza ...
Ọhụrụ imewe Waste & Nri Fermentation inggwakọta tank a na-eji ya mee ihe maka ikpo ọkụ nke aerobic dị elu site na iji teknụzụ nje bacteria, na-eji ike dị ala yana ụgwọ ọrụ dị ala.
Kedu ihe bụ tankị kwụ ọtọ?
Okpomọkụ dị elu Waste & Nri Fermentation inggwakọta tank tumadi mejuputa oke oku nke ahihia nke ulo anu ulo na ulo ozuzu okuko, ahihia nke kichin, sludge na ahihia ndi ozo site na iji oru nke microorganisms iji mezuo ogwu sludge nke na adighi emeru, kwusi, belata ma nweta ego.
Kedụ ka ihe mkpofu na nsị si agwakọta tankị na-arụ ọrụ？
Nke mbụ, tinye ihe ndị a ga-etinye n'ime Waste & Nri Fermentation inggwakọta tank site na ndepụta ndepụta site na ebu ebu. Mgbe ị na-etinye ihe ndị ahụ, bido isi moto, ma onye na-agba ọsọ ọsọ na-eme ka isi okporo ụzọ ahụ malite ịgwakọta. N'otu oge ahụ, eriri gburugburu na-akpali akpali na-atụgharị ihe ndị anụmanụ, nke mere na ihe ndị ahụ na-enwe mmekọrịta zuru oke na ikuku, nke mere na ihe ndị a ga-eme ka mmiri wee malite ịmalite ịgba ụka.
Nke abuo, a na-achịkwa usoro kpo oku nke oku oku eletrik na ala site na igbe eletrik iji malite ikpo oku nke oku na-ekpo oku n'ime ihe na-eme ka aru ya sie ike. Mgbe ị na-ekpo ọkụ, okpomọkụ nke ahụ fermenter na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ iji chịkwaa ọnọdụ okpomọkụ nke fermenter na ebe gbaa ụka. Ala achọrọ. Mgbe gbaa ụka nke ihe ahụ, dechara ihe ahụ na tank maka nzọụkwụ ọzọ.
Ọdịdị nke Waste & Nri Fermentation inggwakọta tank enwere ike kewaa:
1. Nri usoro
2. Tank gbaa ụka usoro
3. Ike agwakọta usoro
4. Igbapu usoro
5. Heating na okpomọkụ ichebe usoro
6. Mmezi akụkụ
7. Usoro nchịkwa eletriki akpaka zuru ezu
Uru nke mkpofu na nri nsị Mixgwakọta tank
(1) Akụrụngwa ahụ pere mpe, enwere ike itinye ya n'èzí, ọ chọghị ụlọ nrụpụta. Ọ bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ mkpanaka, nke na-edozi nsogbu dị elu nke ụlọ ihe ọkụkụ, njem ogologo oge na nhazi nke etiti;
(2) Sealing ọgwụgwọ, deodorization 99%, na-enweghị mmetọ;
(3) Ezi okpomoku na-ejedebe site na oge oyi, enwere ike ịgba ụka na gburugburu ebe mwepu 20 Celsius;
(4) Ezigbo ihe eji arụ ọrụ, dozie nsogbu nke acid siri ike na alkali corrosion, ogologo ndụ ọrụ;
(5) Mfe ọrụ na njikwa, ntinye ngwa dị ka nsị anụmanụ, na -emepụta fatịlaịza organic, na-adị mfe ịmụ ma rụọ ọrụ;
(6) Oge gbaa ụka bụ ihe dị ka awa 24-48, na ikike nhazi nwere ike ịbawanye dịka mkpa.
(7) Ike oriri dị ala, na-ebelata ọnụ ahịa nke imepụta ọkụ eletrik;
(8) Aerobic ụdị nwere ike ịdị ndụ ma mụta nwa na -25 ℃ -80 ℃. Nje bacteria bara uru nwere ike igbu nje na-emerụ emerụ na ngwaọrụ. Ihe omume a na - eme ka fatịlaịza ndị ọzọ dị iche iche enweghị atụ na karịa.
Waste & Nri Fermentation inggwakọta tank Video Display
Efu & Nri nsị Mixgwakọta Tank Model Nhọrọ
Nha ngwaọrụ （L * W * H）
10m³ (ikike mmiri)
³ 20m³ (ikike mmiri)
＞ 30m³ (ikike mmiri)
Usoro kpo oku
Air Compressor aeration akụrụngwa
Otu usoro nke usoro njikwa akpaaka
Nke gara aga: Hydraulic na-ebuli composting Turner
Osote: Wheel Type Composting Turner Machine
Okwu Mmalite Gịnị bụ Vetikal Waste & Nri Fermentation tank? Vertical Waste & Nri Fermentation Tank nwere njirimara nke obere gbaa ụka, kpuchie obere mpaghara na gburugburu ebe obibi. Emechi tankị na-emechi emechi nwere usoro itoolu: sistemụ nri, silo chernobyl, sistemụ hydraulic, sys ventilashị
Hydraulic na-ebuli composting Turner
Okwu Mmalite Gịnị bụ Hydraulic Organic Waste Composting Turner Machine? Hydraulic Organic Waste Composting Turner Machine na-amịpụta uru nke teknụzụ nrụpụta dị elu n'ụlọ na mba ofesi. Ọ na-eji usoro nyocha nke teknụzụ teknụzụ dị elu eme ihe n'ụzọ zuru oke. Akụrụngwa na-ejikọ igwe, eletriki na hydrauli ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Self-proproo Groove Composting Turner Machine? Igwe na-atụgharị onwe ya bụ Groove Composting Turner bụ ngwa ngwa ịgba ụka, a na-ejikarị ya na fatịlaịza organic, osisi fatịlaịza, sludge na ahịhịa ahihia, ugbo horticultural na bisporus osisi maka gbaa ụka na mwepụ nke ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Wheel Type Composting Turner Machine? Wheel Type Composting Turner Machine bụ ihe dị mkpa gbaa ụka na nnukwu ọnụ ọgụgụ organic fatịlaịza Ndinam osisi. Onye na-atụgharị compost na wheeled nwere ike ibugharị na-aga n'ihu, azụ na azụ, nke ọ bụ otu onye na-arụ. Wheeled composting wiil arụ ọrụ n'elu teepu ...
Groove Comdị Composting Turner
Okwu Mmalite Gịnị bụ Groove Type Composting Turner Machine? Groove Type Composting Turner Machine bụ igwe a na-eji aerobic gbaa ụka na compost na-atụgharị akụrụngwa. Ọ na-agụnye uzo shelf, na-eje ije track, ike collection ngwaọrụ, mbịne akụkụ na nyefee ngwaọrụ (tumadi eji maka multi-tank ọrụ). The na-arụ ọrụ porti ...
Okwu Mmalite Crawler Type Organic Waste Composting Turner Machine Isi Crawler Ordị Organic Waste Composting Turner Machine bụ nke ala ikpo okwu gbaa ụka, nke bụ ọnọdụ akụ na ụba kachasị mma iji chekwaa ala na akụ na ụba mmadụ ugbu a. The ihe onwunwe kwesịrị-juru n'ime a tojupụtara, mgbe ihe na-akpali ma and.